Namerina ny Antoko Maro An’isa Ho Eo Amin’ny Fitantanana Ny Fifidianana Naverina Tao Tiorkia · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraJohn Lubbock and Nazli Yirtar
Voadika ny 02 Novambra 2015 17:53 GMT
Istanbul, Tiorkia. 1 Novambra 2015. Sary avy amin'i Ozcan Soysal. Demotix ID: 8942940.
Tamin'ny ankamaroan'ireo vato nisaina tamin'ny fifidianana tao Tiorkia, tafaverina teo amin'ny fahefana ny antokon'ny fitondrana AKP izay nahazo ny maro an'isa. Raha nanao fankalazana ny antokon'ny fitondrana, nifandona tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tao an-tanàna maro mponina Kiorda ao Diyarbakir kosa ny polisy.
Raha nilaza fa nandresy, dia tsy nahatratra ny seza 330 maro an'isa ilaina hanovana ny lalàmpanorenana sy hampitombo ny fahefan'ny Filoham-pirenena bebe kokoa ny antoko AKP tarihin'ny filoha Recep Tayyip Erdoğan.
Nahavita nahazo salan'isa ambonin'ny 10% nilaina hahazoana seza ao amin'ny parlemanta kosa ny antoko pro-Kiorda HDP.
Toa hita fa nandao ny nasionalista MHP ka nanohana ny AKP araka ny paikadin'i Erdoğan hahazoany ny vaton'ny nasionalista ny mpifidy. Toa hita fa nitodika tany amin'ny antoko AKP koa ireo Kiorda mpifidy sasany .
Araka ny voalazan'ny Hurriyet.
nihena ny vato azon'ny MHP:1.885.882
nihena ny vato azon'ny HDP: 1.054.160
mitombo ny vato azon'ny CHP: 462.717
mitombo ny vato azon'ny AKP: 4.373.941
Very vato maro ny nasionalista Tiorka sy Kiorda (MHP & HDP) ka azon'ny AKP izany noho ny antony maro. Tsy miova kosa ny ny vato azon'ny CHP.
Istanbul, Tiorkia. 1 Novambra 2015. Sary avy amin'i Ozcan Soysal. Demotix ID: 8942925.
Nidina hatramin'ny 4,3 tapitrisa ny vato 6 tapitrisa azon'ny HDP, mampiseho ny fahombiazan'ny paikadin'ny governemanta hampiray ny HDP amin'ny milisy PKK Kiorda sy manome tsiny azy ireo noho ny fiafaran'ny fifanarahana fandriampahalemana Kiorda taorian'ny fifidianana tamin'ny volana Jiona izany.
Na dia izany aza, marobe ireo olona niampanga ny AKP ho nangala-bato:
HALA-BATO TIORKA: Very vato 1,7 tapitrisa lasan'ny AKP ny HDP, 6 tapitrisa lasa nidina 4,3 tapitrisa
Nilaza ny fiakaran'ny vaton'ny AKP tampoka tao amin'ireo distrika marobe ireo mpitsikera ny governemanta ary teo koa ny filazana vatom-pifidianana hosoka, nisioka sary vatom-pifidianana efa misy tombokatse alohan'ny nisokafan'ny biraom-pifidianana ny ben'ny tanàna malaza iray avy ao amin'ny AKP.
Government critics pointed to the dramatic increase of votes for AKP in many districts and allegations of fake ballots, with one prominent AKP mayor Tweeting a photo of a stamped ballot hours before polls opened.
Kaonty Twitter iray nampitaha ny isam-bato tamin'ireo distrika isan-karazany tamin'ny valim-pifidianana volana Jiona.
Tsy nandeha ny tranokalan'ny Vaomieram-pifidianana ofisialy nandritra ny hariva, mampitombo ny fanombatombanana eo amin'ny valim-pifidianana.
Manana Vaomiera Avon'ny Fifidianana i Tiorkia izay nikatona nandritra ny alin'ny fifidianana. Tsy maintsy manao izay hampitahana ny voka-pifidianana amin'izy ireo isika!
Nilaza ny HDP fa hanokatra fanadihadiana ara-dalàna mikasika ny hala-bato voalaza izy ireo, ary nitaraina tamin'ny fomba nanatontosana ny fifidianana.
Vaovao avy amin'ny biraon'ny HDP: vato an'hetsiny no novaina. Raha voarakitra izany, hanokatra raharaham-pitsarana manokana izahay.”
“Nahazo vato efa ho 11% izahay na dia tsy nanao fampielezan-kevitra aza. Niezaka hiaro ny tanoranay sy vahoakanay amin'ny fanafihana sy ny herisetra fotsiny izahay,” hoy ny mpiara-mpitarika ny HDP Selahattin Demirtaş, milaza ny nanafihana ny vondrona ankavia tao Ankara tamin'ny 10 Oktobra;
Satria toa manaiky ny vokatry ny latsa-bato ny HDP, maro ireo naneho ny fahadisoam-panantenany fa tsy nihenjana mafy kokoa tamin'ny filazana fisian'ny halabato ny antoko mpanohitra.
Istanbul, Tiorkia. 1 Novambra 2015. Sary avy amin'i Ozcan Soysal. Demotix ID: 8942920
Mandritra izany fotoana izany, nisy ny fahadisoam-panantenana teo amin'ireo vahoaka Tiorka liberaly sy nahita fianarana, maneho hevitra ao amin'ny media sosialy ny maro fa very finoana amin'ny politika Tiorka ary te-handao ny firenena izy ireo.
Ho an'ireo izay milaza fa tsy afaka nankany Edirne ao Tiorkia akory aho, eto Soisa aho ary amin'ny valinteny ara-politika, manomboka androany, nandao an'i Tiorkia aho!
Ny tena nampatahotra dia ny rotaka tao Diyarbakir, tanàna ahitana mponina Kiorda be indrindra ao Torkia sy nisy ny vonan-korontana sy fifanenjanana taorian'ny fifidianana ankapobeny voalohany tamin'ny volana Jiona.
Nametraka sakan-dalana afo ireo tanora Kiorda tezitra tamin'ny voka-pifidianana, miventy teny faneva ao afovoan'i Diyarbakir, miantso valifaty.
Poabasy re ao ivelan'ny foiben'ny CHP.
Satria miandrandra efa-taona manaraka iasan'ny governemanta AKP i Tiokia, nampahatsiahy ny mpanohitra ny profesora Erik Tillman fa misy ny lafiny tsaran'ny faharesena:
Hitantana governemantan'antoko tokana ny AKP hatramin'ny taona 2019. Tompon'andraikitra amin'izay zava-drehetra mitranga izy ireo, tsy manome tsiny mpiara-dia, miaramila, sns (+)
Mahatonga ny filoha Erdogan ao anatin'ny toerana sarotsarotra ny voka-pifidianana. Olona efa lehibe izy saingy lehilahy be faniriana loatra misahana birao izay tokony ho amboninahitra ihany ny tena izy.
Tsy maintsy manapa-kevitra ny AKP amin'ny fomba hiatrehany ny fahefany eo anivon'ny antoko ary mamaritra ny fomba hamindrana izany fahefana izany ho an'ny taranaka mpanao politika vaovao, indrindra fa nanjary olo-malaza amin'ny fisaratsarahana ao amin'ny repoblika izy.
Na izany aza, nanaporofo i Erdogan fa tsy mbola vita ny aminy. Raha ny marina, nampiseho ny famantarana rehetra izy fa vonona hikapoka ireo mpanakiana azy- indrindra ireo ao amin'ny haino aman-jery – ary tsy misy ny famantarana haka ny toerana aoriana ara-politika.
Raha mila vaovao fanampiny momba ny fifidianana ankapobeny 1 Novambra Tiorkia: jereo ny Mikatona ny birao fandatsaham-baton'ny fifidianana ankapobeny fanindroany andrandrain'i Torkia fatratra amin'ity taona ity [mg].